Taariikhda xagjirnimada ayaa muujinaysa in dadkii badbaaday ay kala qaybinayaan kooxaha - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Dhammaystiraha xagjirnimada ayaa muujinaya in dadkii badbaaday ay kala qaybinayaan kooxaha - BGR
Dhammaystiraha xagjirnimada ayaa muujinaya in dadkii badbaaday ay kala qaybinayaan kooxaha - BGR
Waqtigan xaadirka ah, inteenna badani uma baahna wax qancin ah si ay u iibsadaan tigidhka Rakaabka: Dhamaan fasaxyada furitaanka ( sida ku cad tikidhada ugu horeysa Tani ma joojin Marvel Studios inay naga hesho sawirro cusub laba ama seddex maalmood. Khamiis, Marvel wuxuu sii daayay ganacsi kale oo TV-kan ah oo ku yaala kaniisadda YouTube, laakiin wuxuu ka duwan yahay dhibcaha kale ee tirooyinka 30, waxaa ku jira sawirro cusub iyo faahfaahinta sawirka.
Qayb ka mid ah qoraha naga xiiseynaya bilawgii hore - waa wada hadal wadahadal ah oo uu Captain America ku yiraahdo Ragaha Badbaadada ah: "Waxaad taqaanaa kooxahaada. Waad ogtahay shaqadaada. "Tani waa markii ugu horeysay ee aan maqalno kooxaha, laakiin waxay u muuqataa in geesiyayaashii ka badbaaday burburka ay kala qaybsan yihiin Endgame .
Fadlan ku filan, kuwa soo raacay walxo clip, trailer iyo wareysi aad u badan todobaadyadii dhawaa. Macluumaadkan ayaa dhab ahaantii waxaa xubin ka ahaa xubin rasmi ah horaantii todobaadkan. Wargeyska Isniinta ee Good Morning America Scarlett Johansson waxaa laga yaabaa in ay u ogolaato in kooxdu ay kala tagto (si ku meelgaar ah) marka ay shaacisay "waxaa jira saddex cutub oo kala duwan isla wakhtigaas". Maaddaama uusan macquul ahayn, laakiin hadda waxaan ognahay waxa loola jeedo. Ka eeg hareeraha 1: 30 hoose:
Timaha in ka badan seddex saacadood, waxaan ognahay in ay jirto taariiqda taariikhda ah in laga gudbo dhamaadka ilaa dhamaadka Rakaabka: Dhamaan . Marvel wuxuu sameeyay shaqo la yaab leh oo haynta qarsoodiga ah illaa hadda, laakiin ugu dambayntii waxaan bilaabeynaa inaan awoodno inaanu soo aruurinno faracyada si aan u helno fikrad aan caadi ahayn sida Endgame way baabi'i doontaa. Ugu yaraan, waxaan ognahay in weeraryahannada loo kala qaybin doono saddex kooxood oo la dagaallama Thanos (iyo dhammaan hanjabaadaha kale ee horey u soo jeeday).
Rakaabka: Dhamaan waxaa lagu sii deyn doonaa tiyaatarada April 26. waxaad dooneysaa inaad tagto tigidhkaaga hadda.